‘पहिले मलाई हराइयो, यसपटक गच्छदारलाई जित्छु’ : भगवती चौधरी - itaharinews
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २७, २०७४ समय: १८:२८:३५
पहिलो संविधानसभामा मनोनीत सभासद बनेकी एमाले नेतृ भगवती चौधरी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री भएकी थिईन्। २०७० को निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा एमाले उम्मेदवार रहेकी उनी तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग पराजित भइन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित गरेका गच्छदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेले यस पटकपनि उनैलाई सुनसरी–३ मा प्रत्यासी बनाएको छ। यसै विषयमा चौधरीसग गरिएको कुरकानी
सुनसरी–३ मा चुनावी माहोल कस्तो बन्दैछरु
कस्तो आउला त नतिजा त्यसो भए ?
यस पटक चाहिँ जित्ने विश्वास लिएकी छु। यहाँका जनताका लागि धेरै काम गर्न सकेकी छु। एक त म वामगठबन्धनको उम्मेदवार हुँ। अर्कोतिर राप्रपादेखि नयाँ शक्ति र अन्य साना दलका स्थानीय नेताहरु एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले सहज रुपमा विजयी हुन्छु।
विजयकुमार गच्छदारलाई हराउन यति सजिलो छ र ?
गच्छदार धेरैपटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। कहिल्यै निर्वाचन हार्नुभएको पनि छैन। तर सुनसरीका जनताले उहाँबाट के पाए तरु मतदाताको दिमागमा यही कुरा घुमिरहेको छ। उहाँले छानी–छानी मन्त्रालय पाउनु भएको छ। तर त्यो अवसरलाई आफ्नालागि मात्र प्रयोग गर्नुभयो। जनताका लागि प्रयोग गर्न सक्नुभएन। जुन अपेक्षा जनताको उहाँप्रति थियो, त्यो पुरा नभएकाले यस पटक सजिलै चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छ।
गच्छदार कमजोर नै छन् त ?
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन हार्नुको कारण के थियो ?
तपाईंका एजेण्डा चाहिँ के छन्र ?
मेरो मुख्य एजेन्डा युवा स्वरोजगार हो। यहाँका जनताले राम्रो शिक्षा पाएका छैनन्। स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्। उनीहरुलाई प्रविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउनु मेरो प्राथमिकता हो। यहाँका मुसहर मुसहर समुदाय भोकानाङ्गा छन्। उनीहरुका लागि लड्नु मेरो कर्तव्य र एजेण्डा दुवै हो। नेपाल खवरवाट
बाबुराम भट्टराई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नेपालको ३५ औ प्रधानमन्त्री हुन् । स...